परपुरुषसँग सल्किदा श्रीमतीलाई नाङ्गै बनाएर घुमाए आफ्नै श्रीमानले ! – malikanews.com
परपुरुषसँग सल्किदा श्रीमतीलाई नाङ्गै बनाएर घुमाए आफ्नै श्रीमानले !
काठमाडौं । दुनियामा यस्ता कैयौ परिवार छन्, जहाँ पति-पत्नीका बीचमा तेस्रो व्यक्ति रहेको शंका गरिन्छ । तर यहाँ आफ्नो लाइफ पार्टनरमाथि शंका गर्ने यस्तो घटना घटेको छ जसलाई सुनेर अचम्ममा पर्नुहुनेछ ।
डेली मेलका अनुसार घटना चीनको जियाञ्जी प्रान्तको हो, जहाँ ३७ वर्षीय जैंग नामका पुरुषले आफ्नी ३३ वर्षीय पत्नी वांग नीमाथि कुनै पुरपुरुषसँग अफेयर चलेको शंका गरेका थिए ।
मात्र शंका तर यही कुराले जैंगलाई रिस यति उठायो कि उनले आफ्नी पत्नीलाई कहिल्यै पनि भुल्न नसक्ने सजाय दिए । त्यसमा पनि दुःखको कुरा के छ भने महिलाले आफ्नो पतिले दिएको सजाय मान्नु प¥यो ।
जैंगले पत्नि वांगलाई जियांजीको सडकमा बिकनी लगाईदिएर घुम्नका लागि मजबुर पारिदिएका छन् । उनले आफ्नी पत्निलाई बिकनी मात्रै लगाएर घुम्न पठाएनन् बल्कि पत्निको गलामा एउटा बोर्ड पनि टागे जसमा लेखिएको थियो ‘म आफ्नो शरीर बेच्न चाहन्छु ।’
जैंगको मन यति कठोर थियो की जब उनकी पत्नि सडकमा विकनी लगाएर घुम्न थालिन तब उनी कार लिएर पछि पछि हिँड्न थाले । उनलाई सडकमा बिकनी लगाए र घाटीमा लगाइएको बोर्ड हेरिरहे र उनको पछाडी कार लिएर दौडिरहे
तस्वीरमा पनि देख्न सकिन्छ कि आफ्नी पत्नीको बेइज्जती हुँदाहुँदै पनि जैंग कारमा बसिरहेका छन् । उनी आफूले दिएको सजायँमा खुसी थिए । यो घटनामा भएको प्रहरी कारवाहीमा थाहा भयो कि दुबैका दुई छोरी छन् । यस्तो हर्कतपछि जैंगले पत्नि वांगसँग माफी मागेका छन् र यो माफीपत्र उनले पत्रपत्रिकामा समेत छाप्नुप¥यो ।
पत्रकारलाई थाहा भयो कि जैंग अधिकांश समय मदिराको नशामा वांगमाथि कुटपिट गर्थे र जून दिन उनले आफ्नी पत्नीसँग यस्तो हर्कत गराए त्यो दिन पनि उनी मदिराको नशामा थिए ।
यो पनि थाहा भयो कि जैंग अधिकांश प्रोपर्टी डीलिंगको काम ले शहर भन्दा बाहिर जान्छन् । उनकी पत्नि वांग दुबै छोरीसँग यहीको शहरमा बस्छिन् । उनी परिवारसँगै कम समय जिताउँछन् र जब परिवारसँग बस्छन् तब जैंग आफ्नी पत्नीमाथि परपुरुषसँग सल्किएको भनेर शंका गर्छन् । एजेन्सी
यी हुन प्रधानमन्त्रीको ओछ्यान तताउने पोर्नस्टार, उनकै मुखबाट खुल्यो यस्तो रहस्य !